Iga ilaali dadka masuulka ka ah, Kaniisada Dunida ee Switzerland Switzerland (WKG)
Iga ilaali kuwa adiga ku dhashay
Ku alla kii idin aqbalaa wuu i aqbalaa, oo ku alla kii i aqbalaa, wuxuu aqbalaa kan i soo diray. Ku alla kii xaq ah wuxuu ku aqbalaa xaqnimadiisa, oo wuxuu heli doonaa abaalmarinta kii xaq ah (Matayos 10, 40-41 Schlachter turjumaad).
Beesha iimaan ee aan maamuli karo (Tani aniga ayay ii tahay mudnaan gaar ah) aniga iyo aniga qudhaydu waxaan isbadal ballaaran ku sameeyay aaminsanaanta iyo hirgelinta aaminsanaantaan labaatankii sano ee la soo dhaafay. Kaniisaddeenna waxaa ku xirnaa sharci waxaana ay deg deg ahayd in la aqbalo injiilka nimcada. Waxaan gartay in dhammaantood aysan aqbali karin isbeddeladaan qaarna ay aad uga xanaaqi doonaan.
Laakiin waxa aan la filayn waxay ahayd qiyaasta nacaybka loo haystay aniga shakhsi ahaan. Dadka isku magacaaba Masiixiyiin muu muujin Masiixi badan. Qaarkood waxay run ahaantii ii soo qoreen inay u duceeyaan dhimashadeyda degdega ah. Qaar kale waxay ii sheegeen inay jeclaan lahaayeen inay kaqeyb qaataan fulinta dilkeyga. Tani waxay i siisay faham qoto dheer oo ah goortii Ciise yidhi qofkasta oo doonaya inuu ku dilo wuxuu u malaynayaa inaad Ilaah u adeegayso (Yooxanaa 16,2).
Waxaan isku dayay wax kasta si aan durdurkan nacaybka ahi ii qabsan, laakiin dabcan waa ay igu dhacday. Erayada ayaa waxyeelleeya, gaar ahaan markay ka yimaadaa asxaabti hore iyo asxaabta.
Sannadihii la soo dhaafay, ereyada xanaaqsan ee joogtada ah iyo waraaqaha nacaybka si xun umay soo dhicin sida tan hore. Maaha inaan anigu ku noqday mid adag, maqaar adag, ama aan dan ka aheyn weerarada shaqsiyadeed, laakiin waxaan arkaa dadkan naftooda u silicaya dareenkooda liidnimo, walwal, iyo dambi. Kuwani waa saameynta sharciga uu nagu hayo. U hoggaansanaanta sharciga ee sharciga waxay u dhaqmeysaa sidii bustayaal amni, mid aan ku filnayn oo kudhisan cabsi.
Markaan wajaho amniga dhabta ah ee injiilka nimcada, qaar ayaa si farxad leh u tuuraya bustahaas duugga ah, laakiin kuwa kale ayaa si aad ah ugu dhega nuglaaday oo xitaa si adag ugu dhegan. Waxay u arkaan qof kasta oo raba inuu iyaga ka qaado sidii cadow. Tani waa sababta Farrisiinta iyo culimada kale ee waqtiga Ciise u arkeen inuu qatar ku yahay ammaankooda sidaas darteedna ay rabeen inay isaga ku quustaan.
Ciise ma necbahay Farrisiinta, wuu jeclaa oo wuxuu doonayay inuu caawiyo iyaga maxaa yeelay wuxuu gartay inay yihiin cadaawayaashooda ugu xun. Waa isla maanta, kaliya nacaybka iyo hanjabaadaha ayaa ka imanaya kuwa raacsan mabda'a Ciise.
Baybalku wuxuu noo sheegayaa "cabsidu jacayl kuma aha". Taas bedelkeeda, "jacaylka kaamil ah ayaa cabsida ka barta" (1 Yooxanaa 4,18). Ma ahan cabsidaas guud inay ka baxdo jacaylka. Markii aan dib u wada xasuusto, weerarada shaqsiyadeed dhib badan iguma qabaan hadda. Waan jeclaan karaa kuwa i neceb maxaa yeelay Ciise wuu jecel yahay, xitaa haddii aysan si buuxda uga warqabin dhaqdhaqaaqa jacaylkiisa. Waxay iga caawineysaa inaan waxyaabaha u qaato xoogaa nasasho yar.
Aabe naxariis leh, waxaan kaa codsaneynaa naxariistaada dhammaan kuwa wali la halgamaya dareenkooda, kuwa ka soo horjeedda jeclaashada kuwa kale. Waxaan si is-hoosaysiin leh kuu weydiisanaynaa: Aabbahayow, iyaga ugu barakee hadiyaddii toobadkeenidda iyo cusboonaysiinta aad na siisay. Waxaan ku weydiisanaynaa magaca Ciise, Aamiin